के तपाईका हातमा यी शुभ चिन्हहरू छन् ? जान्नुहोस् यसरी चम्किन्छ भाग्य
गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » धर्म/संस्कृती » के तपाईका हातमा यी शुभ चिन्हहरू छन् ? जान्नुहोस् यसरी चम्किन्छ भाग्य
काठमाडौ । हस्तरेखा शास्त्र अनुसार हातका शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, समृद्धि, सम्पन्नता आदिको योग प्रकट गर्दछन्। हामी हस्तस्तक (हस्त रेखा) मा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व र एक व्यक्तिको भाग्यका बारे थाहा दिदैछौ ।
पाल्मस्ट्री लाइन्स वा पाम रीडिंग साइन्स अर्थात हस्तरेखा विज्ञान अनुसार, हातका रेखाले व्यक्तिको जीवनमा उतार–चढावको बारेमा बताउँदछ। उही समयमा, हातको शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, समृद्धि, धन इत्यादि को योग प्रकट गर्दछ। हस्त रेखामा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व यहाँ जान्नुहोस्
हिन्दू धर्ममा शंख ः शंख धेरै पवित्र मानिन्छ। शंख धेरै देवीदेवताहरूको हातमा पनि देखिन्छ, तर मुख्यतया यो भगवान विष्णुको हो। शंख विजयको प्रतीक हो। आफ्नो हातमा शंखको प्रतीक भएको व्यक्ति जीवनमा कहिल्यै विफल हुँदैन। धेरै चोटि औंलाहरूमा शंखको चिन्ह देखिन्छ, वा हातमा धेरै ठाउँमा शंखको चिन्ह देखिन्छ। शंख शेलको प्रतीक भएको व्यक्तिको दुश्मनले कुनै चीज कहिल्यै बिगार्दैन, सँधै जित्छ।
चक्र भगवान विष्णु सम्बन्धित एक धेरै महत्वपूर्ण प्रतीक हो। यो प्रतीक धेरै भाग्यशाली व्यक्तिहरूको हातमा फेला पर्दछ। यो प्रतीक लाखौं मध्ये कुनै एकको हातमा फेला पर्नेछ। जोको हातमा चक्रको प्रतीक हुन्छ अतुलनीय सम्पत्तिको मालिक बन्छ। एक व्यक्तिले राजाको जस्तै स्थिति पनि पाउँदछ। चक्रको प्रतीक पनि उच्च स्तरका सन्तहरूको हातमा देखिन्छ।
स्वस्तिकको प्रतीकलाई हिन्दू धर्मको एकदम पवित्र प्रतीक मानिन्छ। पूजा गर्नु अघि स्वस्तिकको प्रतीक बनाउने विशेष परम्परा छ। आफ्नो हातमा स्वस्तिकको प्रतीक बोक्ने व्यक्तिले सदैव राम्रो काम गर्दछ र धर्मलाई नष्ट हुन दिँदैनन् । यस्तो व्यक्ति आदर र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ।
कमलको प्रतीक माँ लक्ष्मीसँग सम्बन्धित छ। यस व्यक्तिको हातमा यो प्रतीक छ, ऊ एक एकाधिकार राज्यको मालिक हो। त्यस्तो व्यक्ति ठूलो उद्योगपति बन्न सक्छ। साथै, धेरै व्यक्तिहरू तिनीहरूको सेवामा व्यस्त छन्। धेरै अवस्थाहरूमा यो देखिएको छ कि कमलको चिह्न भए पनि कुनै व्यक्ति भने अहंकारी हुन्छ।